umatshini wokutya otya iintlanzi
♦ yondla ngokutyumza
ukuba izinto zakho eziluhlaza azikho kumgubo,udinga a yondla crusher,Ukutyhoboza kwezinto kunokuphucula ukuqina kwamanzi kunye nokwetyisa kwepellet yokutya. Umgubo wokutya owenziwe ngedizili yesando kunye nomatshini wombane wokutya ngesando unganelisa iimfuno zakho zentengiso encinci yokutya ye-pellet. Sinokubonelela ngoomatshini bokutyumza umtya omkhulu wokutya ngepellet.
♦ Yondla ngokuxuba
Ukuxuba yinkqubo ephambili yokuqinisekisa umgangatho kunye nokuphucula isiphumo sokondliwa. Sinikezela ngomxube othe tyaba wokutya okuxutywayo ukuxuba izithako zokutya kwentlanzi, enokuxuba ngokulinganayo. Ukulayisha ngokulingeneyo, indawo encinci yomgangatho, umxube osetyenziswa kakhulu kwisityalo sokutya.
Imveliso yokuNikwa kweentlanzi
Umatshini wethu wokuvelisa iintlanzi unokuhlulahlula zibe zimbini iintlobo: uhlobo lomile intlanzi pellet nohlobo olumanzi feed owongeziweyo. Uhlobo lokuhambisa umatshini wokuhambisa intlanzi oludada kunye nemeko yokubeka izinto kunye nemfuneko yokuxhobisa i-boiler yesosi. Umatshini wohlobo lokutya lokuloba ngentlanzi ulula ngeli lixa umthamo wohlobo lokumanzi lokuhambisa iintlanzi luluhlu oluphezulu, Ngokuqhelekileyo umatshini omanzi wohlobo lokudada lokudada kweenqanawa ulungele umzi-mveliso omkhulu wokupheka kwaye uhlobo olomileyo lokuhambisa iintlanzi lokwenza umatshini lungcono noqoqosho kumsebenzisi omncinci nophakathi ophakathi.
Dry Iifandesi zokugcina iintlanzi zokomisa
Ibhanti yethu yokuomisa ibhanti yokomisa ibhanti rhoqo. Iipellets ezenziwe ngomatshini wokudibanisa iintlanzi entlanzi zidityaniswa zibekwe ngocingo oluxhonywe ngecingo okanye ngeplastiki yebhanti enesithambisi kwaye zidluliswa ngokuqhubekayo kumagumbi okomisa.. Ngexesha lale nkqubo, umoya wokomisa udluliswa rhoqo ngokusebenzisa ungqimba lweemveliso kude kube neepellets zinomxholo ofanele wokufuma ngaphambi kokushiya owomileyo. Ngelixa ukhetha umatshini omanzi wohlobo lokuhambisa intlanzi, Sincomela uhlobo lwerhasi yokomisa i-pellet.
Pack Ukupakisha iipellets zokutya kwentlanzi
Ukwenza i-pellets ezigqityiweyo kulula ukuyigcina, uthutha kwaye ubambe amehlo abaxhasi, kufuneka zipakishwe ngokufanelekileyo. Nge-elektroniki yethu ubunzima bomatshini wokupakisha, iipellets ezigqityiweyo zingapakishwa kwiingxowa, sisindwe, ihanjisiwe, kwaye batywinwe ngokuzenzekelayo, esindisa umsebenzi kunye nexesha kakhulu kwaye ehlangabezana neemfuno zemveliso enkulu. Ngomatshini wokupakisha, ikhowudi yokuthayipha yobushushu ezenzekelayo, Ukuthunga ngengxowa ngokuzenzekelayo kunye nokusika intambo ngokuzenzekelayo kunokuba yimisebenzi yokuzikhethela.